Njalo inkampani ezikhulayo Kufika isikhathi lapho nje udinga ukwandisa abasebenzi reallocate yemfanelo. Yingaleso sikhathi lomqondisi wenkampani avele ezindabeni ezihlukahlukene. Laba ngabantu abaphethe zokuthenga, yokukhiqiza, ukukhangisa kanye nokugqugquzela, kanye izimali. Commercial Umqondisi - cishe umuntu wesibili kule nkampani ngemuva CEO. Anakho imithwalo yayo, imisebenzi kanye namalungelo. umqondisi Commercial kufanele abe othize izimfanelo siqu namakhono ukusebenza. Wayengumuntu onjani, lokho ncamashi ayekwenza, futhi kanjani ukubhala phindela abahle?
Ngubani umqondisi commercial?
ezezimali sphere ubanzi kakhulu, ngakho isicelo ngasinye kumelwe akuqonde ngokucacile lokho okushiwo yinkulumo emsebenzini eziwukhethile, yemfanelo kanye nokuzibophezela.
Ngakho, umqondisi yokuthengisa - specialist ngubani abahileleke ngokuqondile imisebenzi ehlukahlukene ukuhweba kanye nokwesekwa. Kulokhu, uhlu izibopho kuncike kuphela imininingwane yalolu kwamabhizinisi kanye nosayizi walo. Kodwa kusobala ukuthi singasho ukuthi kungenxa umqondisi commercial lenkampani eyenza inzuzo, ezanquma inkambo futhi ijubane yentuthuko.
isikhulu okunjalo uqondisa hhayi kuphela ukuthenga yokuthengisa imikhiqizo, kodwa futhi neminye iminyango ukumaketha kanye Logistics. Njengoba umqondisi commercial kudala futhi igcina ubudlelwano nezinkampani ezinkulu kanye namakhasimende ukhiye futhi unesibopho ephetha amadili ikakhulukazi lesi sikhundla esinemali.
Ngokuvamile, singasho ukuthi lena indima eyihloko isakhiwo kwanoma iyiphi inkampani. Yingakho Abafakizicelo Iyafaneleka eziphoqelelwe ngempela high futhi kanzima.
Beka umqondisi commercial e uhlaka lwenhlangano yenkampani
Isikhathi esining impela kulesi sikhundla kudidaniswe kwenhloko yomnyango yokuthengisa. Kodwa umqondisi commercial unendawo ecacile sabaphathi zokuphatha. Kuyinto ngokwabelana ezinjalo yemfanelo inkampani isebenza njenge clockwork.
Isikhundla umqondisi commercial kungokwalabo ezingeni lokuphatha yesibili. Lena isinyathelo esilandelayo emva Umqondisi. Ngesikhathi esifanayo, Isekela Finance esimisiwe nezicashisiwe yinhloko inkampani kuphela jikelele.
Ukuze wonke umsebenzi ku umqondisi commercial inesibopho nemibiko ngqo Umqondisi. Leti tindzaba ka ukuphathwa zokusebenza, isibopho sezomthetho kwezigwegwe, ukuhweba nemali inzuzo kanye ezezimali. Nokho, uyacabangela mathupha obhekene ukuphepha izindlela ezihlukahlukene impahla kanye isayine isivumelwano ne-ubuholi.
Uma isikhulu esiphezulu sezimali engekho emsebenzini ngenxa yokugula, uhambo ibhizinisi noma eholidini, bese endaweni yayo umyalelo ehlukene likaMqondisi aqokwe kwesinye isisebenzi lenkampani. Isekela Commercial Umqondisi unamalungelo efanayo kanye nezibopho kuyo uthola ngesikhathi esithile. Wabuye ithwala umthwalo futhi isibopho.
Yini umqondisi commercial?
Ukuze ukhethe kahle indawo inkampani, kudingeka siqonde ngokucacile lokho emigomweni ziphambi kwakho. Lokhu kuzovumela kahle kakhulu futhi kahle ukwaba yesikhathi namandla awo. Ngaphezu kwalokho, leli qiniso libaluleke kokubili umfakisicelo kanye umqashi. Phela, uchaze yemfanelo kanye nemisebenzi kungaba kalula zidinga imiphumela umsebenzi. Kungenzeka futhi ukuba njalo ukusebenza imisebenzi yayo.
Into kuphela ukuthi unaka ngokukhethekile inzuzo yenkampani. Umqondisi ukuthengisa inkampani kumele sihlale njalo siqaphele isimo futhi bathathe izinyathelo ezisheshayo nge ukwehla kule inkomba. Ngenxa yale njongo kwangathi ucele nanoma yimiphi imibhalo commercial ezivela kweminye iminyango, kanye ukulumathisa izenzo nabanye amakhanda umnyango.
Lokhu umsebenzi owusizo Ungahambisa kwezezimali lenkampani ebuhlotsheni bayo ne etikhungweni letahlukahlukene kanye nama-ejenti kahulumeni. Kulokhu, kubalulekile ubuso inkampani futhi unegunya eligcwele ukuxazulula izinkinga.
Commercial Umqondisi - ungumuntu uphathiswe igunya omkhulu futhi umthwalo wemfanelo. Ngenxa yalokho, kufanele ngikwenze ngokugcwele zonke izidingo umqondisi wenkampani, ukuthuthukisa kanye ukwandisa izibopho commercial, kanye ukuba banamathele uhlelo olukhona ibhizinisi.
Kule ndaba, it is saphathiswa lokhu umthwalo:
NeKwakha nokudidiyela ukuthuthukiswa kwamazinga izinga kanye yokugcina imikhiqizo noma amasevisi, kanye eliningi yabo. Kwakuwusuku umqondisi commercial inquma izindleko yokugcina izimpahla, okunezinhlobonhlobo zabo futhi umthamo production.
Ukudidiyela ukuthuthukiswa nokuqaliswa ukumaketha isu. Lo mhlahlandlela kunomthelela oqonde ngqo empilweni zezimali ikusasa inkampani.
Lubhekele ukuqeqeshwa nokuthuthukiswa kwabasebenzi, ukulawula umsebenzi abasebenzi.
Gada ukulungiselela ngesikhathi esifanele accounting imibhalo, kanye isikhathi ukunikeza ubuholi babo. Ngaphezu kwalokho, umqondisi kwezentengiselwano umsebenzi emehlweni abo bonke izibambiso zezimali.
Ukuqapha ukuqaliswa kokusebenza jikelele uhlelo lwebhizinisi ubuye futhi isabelomali yenkampani. Qinisekisa ukukhokhelwa ngesikhathi esifanele futhi egcwele inkokhelo.
Ngaphezu kwalezi zimfuneko, inkampani ngayinye inelungelo ukufaka yemfanelo sakhe ngencwadzi kuMcondzisi Commercial. Konke kuncike usayizi imininingwane yalolu kwamabhizinisi kanye nesakhiwo ukuphathwa. Ngo izinkampani Russian ku ukuphelela imisebenzi kungathinta izifiso ezithile abasunguli.
Izimfanelo main ukuthi kufanele abe uchwepheshe
Commercial Umqondisi - esimweni esinzima kakhulu, ezidinga lesisisebenzi amakhono emisebenzi afanele, kodwa futhi ngezici ezithile ubuntu hhayi kuphela. Futhi akugcini nje eliqhutshwa ukuthandwa nalokho abakuthandayo, kodwa kunalokho isici kuposi elikhethiwe.
Asiqale ne izimfanelo professional kanye namakhono. Iningi izinkampani ukuphoqelela umfakisicelo nalezi zidingo ezilandelayo, okothi abonisa ku phindela yakho Commercial Umqondisi:
Amandla ukusebenza futhi ulwazi emakethe ikakhulukazi lapho le nkampani esebenza ngayo.
Ikhono balolonge futhi ulawule iziteshi zokusabalalisa zangaleso obekulindelekile.
Zula uhlelo lokumaketha ukuze lelisu ngempumelelo amaphrojekthi ahlukahlukene ukukhangisa.
Ikhono ukuxhumana VIP amaklayenti ukuba asayine inkontileka isiphelo sesimiso ukuthengiselana ezinkulu.
Ubungoti ngolimi lwesiNgisi ukuxhumana futhi sisebenze imibhalo.
Uma sikhuluma nobuntu ikhandidethi, izimfuneko womqashi kukhona ejwayelekile muhle. Njengakwamanye izikhundla eziningi, umqondisi commercial esizayo kumele sibe nenjongo futhi ukucindezeleka, nobudlelwano futhi onekhono. Kumelwe ube umholi, thintana nokukhulumisana ngepumelelo nabanye nabasebenzi kanye iyiphi izilaleli. Liphinde ikakhulukazi lwesayensi kahle futhi okungezona ingxabano.
Yini izinkampani zisebenzisa lokhu okuthunyelwe
Manje etimakethe zingatholakala inombolo kahle esikhulu zomsebenzi kundawo umqondisi commercial. engavamile wabo ukuthi lezi zikhangiso kungenziwa hung isikhathi eside. Kunezinto ezimbalwa yezizathu: okokuqala, umqashi ngempela kanzima futhi ezikhethwe ngokucophelela ukhetho, futhi, okwesibili, abasebenzi abasanda waqasha musa ukugcina umthamo isamba imisebenzi esemthethweni futhi umsebenzi isigqi.
Indlela yokuthola wezimali nezimfuneko ilwazi namakghono buhluke kakhulu izinkampani Western futhi yasekhaya. Kufanele acabangele sengqondo nomlando ukuthuthukiswa kwebhizinisi eRussia nakwamanye amazwe.
Ngo izinkampani zasekhaya njengoba kuphakama Commercial Umqondisi kusukela ukunwetshwa inkampani noma ukulungiswa ukuphathwa isakhiwo ngenxa ukwehluleka imisebenzi yayo. Ngakho-ke, izidingo ukhetho kakhulu anyakaza. Lapha, umqondisi yokuthengisa - jikelele abaqeqeshiwe kanye nezifundiswa abanolwazi bakwazi ukubhekana ngokushesha izinkinga ezinqwabelene eminyakeni.
izinkampani Western kanye nezidingo ukusebenza for izicelo Sekuyisikhathi eside ecacile neqondile. Ngakho-ke, umuntu ofake isicelo lula kakhulu ukuzulazula, ngoba ngempela ukuthi yilokhu wemfanelo, yini imisebenzi yayo esemqoka kanye nemithwalo yemfanelo. Ngaphezu kwalokho, igxila iyona efaneleyo, kunokuba sympathies subjective.
Imiholo kanye nezidingo eziyisisekelo for ozobhapathizwa
Ukwakhela phezu kwasiphi bangalindela umqondisi commercial esizayo njengoba isinxephezelo for umsebenzi wabo onzima? Phela, incazelo umsebenzi Commercial Umqondisi unikeza uhla sasivumela ebanzi yemfanelo nomthwalo wemfanelo omkhulu.
Kuyaphawuleka ukuthi iholo kweyeme ubukhulu inkampani ngisho indawo yayo. Ngokwesibonelo, iholo eliphezulu kakhulu e uMqondisi Commercial ebonwe eMoscow noma Petersburg. Lapha umsebenzi bangalindela Iholo ngenyanga ruble 80,000. I kude eyinhloko-dolobha, ezansi Bayozuzani.
Ngaphezu kwalokho, sokunyusa amaholo alabo futhi abeke izidingo ephakeme: nesipiliyoni izikhundla abafanele we engu-3, ukudlula ngezifundo ezehlukene kanye yokuthengisa ukuqeqeshwa, nesipiliyoni ezezimali kanye beqhuba izingxoxo ngempumelelo. Futhi siyalazisa khona i MBA kanye owazi isiNgisi.
Isilinganiso sobudala umqondisi commercial esizayo Uneminyaka ecishe ibe u-40. Ngokuvamile kungenxa amadoda nge imfundo iphrofayela ephakeme. Ngaphezu kwalokho, ngamunye kulabo abazobhapathizwa kumele babe izinkomba ezinhle kusukela imisebenzi odlule.
Futhi, umqashi zingaba kanye nezidingo ezithile umfakisicelo. Isibonelo, lokhu impahla ngomgwaqo, imvume ukwenza imisebenzi ngaphandle amahora ukusebenza, khona-diploma ezithile futhi t. D.
Ukwenza umqondisi commercial emsebenzini
Lo magazini isixazululekile e inkampani ngayinye ngokuhambisana abasebenzi kanye nemithetho ekhona. Oku-candidacy is wavumelana abanikazi inkampani. Uma ungayitholi professional abasebenzi ilungu ohlangothini, ikakhulukazi kulesi sikhundla esimisiwe accountant abakhulu. Le ndoda iphethe yonke ulwazi nemakhono ladzingekile lesi sikhundla. Kulokhu, i entry ezifanele ukudluliswa encwadini yomsebenzi.
Incwadi yokuqokwa ngemvume mathupha ngumqondisi kwezentengiselwano CEO noma isitshalo umphathi. Ngendlela efanayo, futhi phansi okwesikhashana izisebenzi nale isikhundla.
Ngenxa yokuthi umuntu osanda yokutholwa unomsebenzi omkhulu, it is ifanelekile ukuphothula isivumelwano umsebenzi. Kuyo, njengoba encazelweni umsebenzi icacisa zamalungelo neembopho umqondisi commercial esizayo. Iphinde nerejista iphuzu mayelana nobumfihlo non-ukudalulwa okubhekene kanye nemibandela ekunqanyulweni ekuqaleni yesivumelwano ekhona.
Nokho, noma kunjalo, uMnyango izisebenzi kuyinto entry okuhambisanayo ibhuku ngokuthatha isikhathi kanye nenani oda.
Job Description okwesikhathi Umqondisi Commercial
Isakhiwo inkampani ngoba isisebenzi ngasinye okulungiselelwe umhlahlandlela ekhethekile, okuyinto libala zonke izici zomsebenzi bese ezicashile isikhundla sakhe.
Job Description Commercial Manager iqukethe izinto ezilandelayo:
hlinzeka Jikelele. Lapha, njengoba umthetho, kuthiwa ziqala izincazelo eziyisisekelo kanye nemigomo, izimfuneko izimfanelo nokomuntu siqu futhi imithetho eyisisekelo umsebenzi ngesikhathi ibhizinisi.
yemfanelo umsebenzi. Kuleli qophelo, ngokucacile sicacisa wonke amaphuzu ngaphansi umthwalo umqondisi commercial.
Amalungelo. Lesi sigaba ikhomba amathuba negunya umsebenzi.
Umthwalo. Leli phuzu kubaluleke ngokukhethekile, ngoba Inikeza ulwazi kwezibopho umqondisi commercial inkampani kanye nomthetho.
Futhi kule dokhumenti kungenziwa ebekiwe izimo abasebenzi izimangalo nezinye izinto zokusebenza ngokuzikhethela ukuphathwa inkampani. Ngokuba non-ukuhambisana incazelo umsebenzi wesisebenzi ongaxoshwa.
Kanjani futhi ngalokho imingcele kulinganiselwa umqondisi commercial umsebenzi?
Manje iyiphi inkampani omunye izinkomba main womsebenzi umsebenzi ukusebenza yayo, isb. E. Kunanzuzoni waletha futhi yiziphi izinzuzo Kwatholakala. Noma kungaba ukubaluleka kokugcina inzuzo ezizuzwa inkampani ngethemu lomuntu. Lena kuyinkomba ebaluleke kakhulu, t. Ukuze. Angaba ke ngqo zithinte inani nomholo kanye nezincomo.
Imisebenzi abaphathi kakhulu ibhizinisi kuhlolwa nalezi zidingo ezilandelayo:
ukusebenza eqondile incazelo yakho siqu umsebenzi. Lapha, ukukala ukuhambisana ngakunye yesivumelwano.
Izinga High yokulaya kwakuwukuthi. Umqondisi nezindaba commercial kufanele ehlelekile futhi umuntu onokwethenjelwa, okungukuthi. Ukuze. Kuyinto zamanje nezesikhathi esizayo inhlalakahle inkampani.
Ukusebenza kwebhizinisi uhlelo inkampani esikhona. umsebenzi yenkampani, kanye izinkomba zezimali ngokucophelela nangokuqondile ibalwa. Uma noma iyiphi nto ayenziwanga kwenziwe ngesikhathi, kungaba ngempela nomthelela ongemuhle nekusasa layo.
Ingabe isifinyezo efanele futhi okunenjongo
Umqashi bangase bangaqapheli ukuthi esiyingqayizivele siqu izimfanelo, amakhono, isipiliyoni kanye nezinye ezicashile ubuntu isisebenzi esizayo. Ngakho-ke, yimuphi umfakisicelo kumele akwazi ukulungiselela kahle phindela wakho. Phela, lokhu kuxhomeke ekutheni kuzothatha iqembu.
Ngakho, ngo-Kafushane, Commercial Umqondisi kufanele ucacise:
Idatha yomuntu siqu (usuku lokuzalwa, indawo yokuhlala noma uhlale, nokunye. D.).
Ezemfundo (amanyuvesi kanye nazo zonke izifundo).
isipiliyoni Umsebenzi (igama lenkampani, isikhundla kanye nemithwalo yemfanelo).
izimfanelo Professional namakhono (isigaba kufanele ahlinzeke okungenela kuyona izikebhe ezincane).
Imininingwane engeziwe (ulwazi izinhlelo nezilimi).
Ngaphezu kwalokho, kukhona amathiphu ambalwa sendlela ukugcwalisa isifinyezo:
Olunye ulwazi oluthile futhi izibalo encazelweni impumelelo okhokhelwayo.
Kungcono libalule imisebenzi izinkampani lapho uke wasebenza ngaphambili.
Bheka phindela yakho ngemehlo umqashi.
Andrei Nikitin: isithombe, biography Nikitin Andrey Sergeyevich
I-Vitamin B ebusweni ku-ampoules: izindlela nemithetho yesicelo
Sesha izindiza ku-inthanethi - manje Megaavia.ru. amathikithi endiza ezimbalwa ukuchofoza
Air cleaner for efulethini: kanjani ukukhetha? Air purifier for yokungezwani komzimba: kuzibuyekezo, izintengo
Sabetta Airport. Yamal District, Yamalo-Nenets Autonomous avtonomnyy